Wasiir Goodax Barre oo sheegay inuu ka xun yahay hadalkiisii ahaa inuu fashilmay Imtixaamka Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wasiir Goodax Barre oo sheegay inuu ka xun yahay hadalkiisii ahaa inuu fashilmay Imtixaamka Puntland
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Cabdullaahi Goodax barre ayaa raalin gelin ka bixiyay hadal uu ka jeediyay degmada Jowhar, kaasi oo ku sheegay inuu fashilmay imtixaanaadkii dugsiyada sare iyo dhexe ee Puntland.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa lagu sheegay in wasiirka oo ku dhexjera hadal uu ka jeedinayay magaaladda Jowhar loo sheegay in madaxweynaha Puntland ku dhawaaqay in la jabsaday xarumihii lagu kaydinayay imtixaanaadka Puntland.
Qoraalka waxaa lagu sheegay inay haboonayd in wasiirku raadiyo warka xaqiiqdiisa ka hor inta uusan jeedin.
“Wasiirku wuxuu u xaqiijinaya ardayda, waalidiinta iyo dhammaan shacabka puntland inuu garab taagan yahay, una rajaynayo in alle u fududeeyo imtixaanka” Sidaas waxaa lagu yiri warqada ka soo baxday wasaaradda waxrashada Federaaka.
Gabagbadii, Wasiirku wuxuu bogaadiyay ardayda , waalidiinta iyo bahdaa waxbarashada ee dadaalka ugu jira waxbarashada.
Wasiir goodax Barre oo haatan ku sugan Jowhar ayaa xalay sheegeen inuu fashilmay imtixaankii Puntland ,isagoo xiligaas jeedinayay hadal uu doonayay inuu ku qanciyo masuuliyiinta maamulka Hirshabelle oo degaamadooda ka eryay kormeeryaashii wasaaradda, islamarkaana ka hor yimid imitxaanka labaad ee wasaaradu qaadayso bishan may dhammaadkeeda.